UNehemiya | Dam Mang
Isifundo 2 *Okthobha 5–11
Sabatha Emva Kwemini
Fundela Isifundo Sale Veki:
Nehemiya 1–2, Dut. 7:9, Ndum. 23:1–6, Num. 23:19.
“Kwathi ndakuweva la mazwi, ndahlala phantsi, ndalila, ndenza isijwili iintsuku, ndazila
ukudla, ndathandaza phambi koYehova uThixo wamazulu, ndathi, Camagu, Yehova,
Thixo wamazulu, Thixo omkhulu, owoyikekayo, obagcinela umnqophiso nenceba
abamthandayo, abayigcinayo imithetho yakhe’ ” (Nehemiya 1:4, 5).
Okwangoku, mabini amaqela abathinjwa abuyele kwaYuda ngokuzalisekiswa
okungagqibekanga kwamadinga kaThixo kuhlanga lakwaSirayeli.
Kodwa kusekho elinye iqela labathinjwa uThixo alilungisayo. Iqela
lokugqibela labathinjwa liyalelwe ukuba lilungise ingxaki. Nangona
amaqela amabini okuqala abuyela ukuya kwakha iYerusalem nokuya
kugqibezela inxalenye yelo phulo ngokugqibezela itempile, konke okunye ukwakha
kwayekwa ngenxa yokuqhambuka kwenkcaso kwiintlanga ezibangqongileyo. Abantu
bommandla obangqongileyo babengafuni amaSirayeli akhe isixeko neendonga zaso
kuba babesoyikisela ukuba amaSirayeli angaluhlanga olunamandla njengokuba ebekhe
alulo ngaphambili (Ezra 4:6–24). Ngoko ke, ukubuya kwamaSirayeli kwabonakala
kusisigrogriso, eso abagqiba ukuba basimise. Kodwa uThixo wayengababizanga abantu
baKhe ukuba abathi tyaa ngethuba lokwenza oko wayebabizela ukuba bakwenze.
Yiyo lo nto, wayelungisa enye indoda yokwenza intando yaKhe, nokuphumeza iinjongo
zaKhe. Igama layo yayinguNehemiya, kwaye sibuyela kuye nomsebenzi wakhe kaYehova.
*Funda isifundo sale veki ukulungiselela iSabatha, Okthobha 12.
Cawa Okthobha 6
UNehemiya Wamkela Iindaba Ezimbi
Incwadi kaNehemiya ngandlel’ithile ivula ngohlobo olunye eyavula ngalo incwadi
kaDaniyeli (funda uDan. 1:1, 2), yaye oko kwakungeendaba ezimbi. Ewe, uninzi
lwalubuyele elizweni lokhokho balo, kodwa izinto zazingabahambeli kakuhle ncam apho.
Funda uNehemiya 1: 1-4. Kwakutheni ukuze uNehemiya akhathazeke kangaka?
Wasabela njani kwiindaba ezimbi awazifumanayo?
Amanye amaYuda ayesiwe ekuthinjweni kwiminyaka engaphambili aziswa eShushan, elinye
lamaziko olawulo amane obuKumkani bamaPersi, apho uNehemiya wayesebenza komkhulu
njengomngcamli. Igama elisetyenziselwe “uHanani umzalwana wam” makube ikakhulu
lisingisele kumzalwana ngokwegazi, kuba kukho ukukhankanywa okufanayo kodwa
kokuzalana ngakumbi-kukaHanani kuNehemiya 7:2, nangona isenokuba kukukhankanywa
nje komnye umSirayeli wakubo. Incoko noHanani phantse ikakhulu yenzeka phakathi
kombindi kaNovemba nombindi kaDesemba ngo-445 b.c., kwiminyaka ethile eli-13 emva
kokubuyela kuka-Ezra eYerusalem. UHanani uxela ukuba imeko eYerusalem imaxongo.
Abantu abakwazanga kuyakha iYerusalem, notshaba luzidilizile iindonga zesixeko, sasala
singakhuselekanga kusenkangala. UNehemiya makube weva amarhe okuba amaSamariya
azidilizile iindonga zesixeko, kodwa wayengenazo iimpendulo ezitsolileyo de kwaleli
xesha. Ngenxa yoko, uKumkani u-Artashashta ngokwakhe wadakisa ithemba labafuduki
ngokumisa inkqubela-phambili yolwakhiwo emva kokukhalaza kwabantu abangaphesheya
komlambo (Ezra 4).
Nangona yayakhiwe kwakhona itempile, yayingasebenzi ngokupheleleyo kuba
abantu ababedingeka kwinkonzo yetempile babengakwazi kuhlala eYerusalem. Imeko
yamdandathekisa uNehemiya njengokuba ifuthe lezindaba lagqobhoza umphefumlo
wakhe: amaYuda ayengamzukisanga uThixo nangona ayebuyele lo njongo. Endaweni
yoko ayityeshela indlu kaThixo nesiXeko esiNgcwele, ngenxa yokoyika kwawo utshaba
nengcinezelo. Ngalondlela, uNehemiya ngokuqinisekileyo ubhenela kuThixo. Akakhalazeli
ukuba abantu bakwaYuda baswele ukholo okanye abanyhashe njengamagwala, okanye
avele ayamkele imeko njengoko injalo. UNehemiya usuka awe emadolweni aqalise
Kwezindaba zimbi, uNehemiya walila, wazila ukutya, ze wathandaza. Oku
makusixelele ntoni, ngokukodwa ngamaxesha okulingwa, ngendlela emasibhenele
Mvulo Okthobha 7
Funda umthandazo kaNehemiya ofumaneka kuNehemiya 1:5-11. Zeziphi izakhelo
ezohlukeneyo zomthandazo? Kutheni eziquka naye emthandazweni njengabo
1. Thixo umkhulu unenceba (Neh. 1:5).
2. Ndibazele indlebe (Neh. 1:6).
3. Imvumo-zono (Neh. 1:6, 7).
3. Usikhulule (Neh. 1:10).
2. Ndibazele indlebe (Neh. 1:11).
1. Thixo bonelela ngempumelelo nenceba (Neh. 1:11).
Umthandazo kaNehemiya yintlanganisela emnandi exela ubukhulu bukaThixo, izono
zabo, uze uqukumbele ngesikhalo soncedo. Lo mthandazo ufana nomthandazo kaDaniyeli
kuDaniyeli 9, kwaye kungenzeka ukuba uNehemiya wayesazana nalo mthandazo.
Kuyaphawuleka ukuba uNehemiya akaqali ngesikhalo soncedo, koko uqala adandalazise
inyaniso yokuba ungubani uThixo, Mkhulu uyoYikeka. Kanjalo uthi thakanca ukuba
uThixo uyawugcina umnqophiso wakhe yaye unenceba kwabo bamthandayo, ngokungathi
uyamkhumbuza uThixo ukuba ubesoloko ethembakele akanakukwazi ukuba yenye into
Lo mthandazo wakheke ngendlela eyodwa (eboniswe ngasentla) egxile kwivesi 8, apho
uNehemiya achaza izithembiso zikaThixo. UNehemiya uthi: “Khumbula!’ Ngamanye
amazwi: Khumbula, Thixo, ukuba uthembisile ukuba uyakusithi saa xa singathembekanga
kodwa kanjalo uthembisile ukuba uyakusibuyisa ze ubuyisele yonke into. Ngenxa
yokuba yenzekile eyokuqala, ngoku lixesha lokuba uzalisekise enye le kuba sibuyela
kuWe. UNehemiya akoyiki ukubanga amadinga kaThixo nokukhumbuza uThixo ngawo.
Endaweni yoko, uThixo uyonwatyiswa kukulungela kwethu ukubanga amadinga aKhe.
Ufuna sikholelwe kuwo ze ngalo ndlela siwankqangaze kuYe. Ngokuthetha oko uThixo
asithembise kona, singomelezeka kwisigqibo sethu sokuthemba lo madinga, ngokukodwa
xa konke kukhangeleka kumfiliba.
Zeziphi ezinye zezithembiso zikaThixo onokuzibangela zona kanye ngoku?
Kutheni le nto kubalulekile ukuba ungancami nakanye ukubanga ezo zithembiso?
(Kakade, xa uncama, kusala ntoni?)
UNehemiya Uthetha Phandle
UNehemiya 1:11 uthi uNehemiya ngumngcamli kakumkani. Kuthi oku kungakhangeleka
ngathi ngumsebenzi ongabalulekanga, kodwa abangcamli ingangamadoda ampembelelo
imandla, kuba babesiya rhoqo yaye besondele kukumkani. Abangcamli babengcamla iziselo
zikakumkani ukunqanda ukugula okanye ukufa kukakumkani. UHerodotus udandalazisa
ukuba amaPersi ayebabeke ezimbekweni abangcamli, njengokuba babethathwa
njengamagosa azizitatanyiswa. Umzekelo, umngcamli kakumkani wase-Asiriya
u-Esarhaddon naye wayekwa ligosa eliyintloko ebukumkanini. Ngoko ke, uNehemiya
ukwisikhundla esibekekileyo ebukumkanini, kwaye ngenxa yokuya kwakhe kukumkani,
ubongoza uThixo ukuba amsebenzise ekuthetheni nokumkani ngemeko yakwaYuda.
Funda uNehemiya 2:1–8. Kwenzeka ntoni ngenxa yemithandazo nokuzila
Umthandazo uphendulwa ngenyanga kaNisan, ngamafutshane iyinyanga ka-Apreli
ngo-444 b.c. zidlulile iinyanga ezine susela mhla uHanani namaYuda bazisa iindaba
ezinxunguphalisayo ngeYerusalem kuNehemiya. Kangangeenyanga ezine, uNehemiya
wathandaza ezila, yaye umhla nezolo kwakunokukhangeleka ngathi uThixo akaphenduli.
Kodwa ixesha likaThixo lisoloko lichanekile. UThixo walungisa ikumkani ukuba imve
uNehemiya kwanokuba isabele ngendlela eyiyo.
Yayingeyonto eyenzeka mihla le eyokuba umngcamli akhululwe emisebenzini yakhe
okwethutyana ayokuba yirhuluneli kwilizwe elingelinye. UThixo wathetha ngoNehemiya
waza wayichukumisa ikumkani yamaPersi u-Artashashta I ukuba imenze irhuluneli
yommandla wakwaYuda. Ukukhankanywa kukakumkanikazi kubonisa ukuba esi
yayisisiganeko esisekhusini, njengoko kwakungaqhelekanga ukuba ikumkanikazi ukuba
isoloko ikhona kwizidlo ezisemthethweni. UNehemiya akayikhankanyi kwangoko
iYerusalem, ukuze agcine ikumkani ekubeni ebe neengcamango ezizezinye, koko wenza
isibongozo esichukumisayo kukumkani ngento enokwenza naye. Ngethuba indawo ethile
ikhankanywa, ikumkani seyizuziwe kade.
Kungaziphi iindlela esinokubona ukufana phakathi kwesikhundla sikaNehemiya
kule nkundla kunye nesikaDaniyeli eBhabheli? Sithetha ntoni ngesimilo
sikaNehemiya kangangokuba ukumkani akhangeleke athambekele kakuhle
Lwesithathu Okthobha 9
Ukumkani wathumela iincwadi ngoNehemiya zisiya kuSanebhalati waseHoron noTobhiya
u-Amon, amagosa abekekileyo engingqi engaphesheya koMlambo, ukuze bahlahl’elindlela
oko kwakuzakuphunyezwa nguNehemiya. Ukongeza, uKumkani wayalela u-Asafu,
umgcini-hlathi likakumkani, ukuba abonelele uNehemiya ngayo yonke imithi edingekayo
ukwakha isixeko, iindonga, namasango etempile.
Funda uNehemiya 2:9, 10. Ezi vesi zisixelela ntoni ngenkcaso ababezakujamelana
nayo uNehemiya namaYuda xa ewonke?
UNehemiya wafika eYerusalemi malunga neminyaka u-445/444. Inkcaso ibonakala
iqhambuka nkqu kwangaphambi kokuba uNehemiya alinge ukwenza nantoni na, ngenxa
yokuba isicelo esidluliselwe kumabamba sixhokonkxe iigxaki. Nangona uTobhiya iligama
lesiYuda, elalithetha “uYehova ulungile” (unyana wakhe uYehohanan naye wayenegama
lobuYuda, “uYehova unobabalo”), wayesebenza njengebamba lama-Amon. Ngenxa
yoko, iYerusalemi yayirhangqwe ziintshaba: uSanebhalati, ibamba lakwaSamari ukuya
emantla, uTobhiya ibamba lama-Amon ukuya empuma, noGeshem um-Arabh (Neh.
2:18, 19) ukusinga ezantsi, owayebambe i-Edom nakwaMowabhi. Kungelishwa ukuba
ubunkokheli balo ngingqi bambhebhetha uNehemiya ngokukhathalela “ukulungelwa”
kwabacinezelweyo. Abaxhaphazi abonwatyiswa kukulungelwa kwabo babagrogrisayo.
Ukufika kukaNehemiya eYerusalem, noko kunjalo, ephahlwe ngumkhosi, nto leyo
ebonisa ukuba wayeze ngomsebenzi obalulekileyo, kwaxhokonxa umona weentlanga
ezingabahedeni ezihlala kufutshane nesixeko, ezazisoloko sisaneza intiyo yazo ngakumaYuda
ngokuwafumbela ingozi nogculelo. Phambili kulomsebenzi mbi yayiziintloko ezithile
zeziziwe, uSanebhalati waseHoron, uTobhiya u-Amon, noGeshem u-Arabhi. Kwasekuqala
ezinkokheli zayibeka phantsi kweliso elibukhali imigushuzo kaNehemiya zaza zazama
ngandlela zonke emandleni ukuzo ukutshitshisa amacebo ache nokuthintela umsebenzi
wakhe.”—Ellen G. White, Prophets and Kings, p. 635.
Ngawaphi amanye amabali eBhayibhile onokuwafumana nawabonisa indlela
abajamelana ngayo nenkcaso abo babizelwa nguThixo ekwenzeni entando yaKhe?
Yiza nempendulo yakho eklasini ngeSabatha.
Lwesine Okthobha 10
UNehemiya Ulungiselela uMsebenzi Wakhe
Ngaphandle kwamathandabuzo, iNkosi yambizela lo msebenzi uNehemiya yaye
izakubonelela ngako konke azakudinga. Exhotyiswe lulwazi lwezithembiso zikaThixo
nokuqiniseka kobizo lukaThixo, uNehemiya wabheka phambili. Kodwa waqhubela
phambili ngobulumko nangokuthandaza. Ngamanye amazwi, nangona wayesazi ukuba
uThixo ukunye naye, olu lwazi zange lumnqande, okokuqala ekuzikiseni ukucinga koko
Funda uNehemiya 2:11–20. Yintoni ayenzayo uNehemiya ukulungiselela iphulo
Izifundo Zobunkokheli: Isifundo 1: UNehemiya akaxeleli nabani ukuba athini amacebo
“ento ebeyingenise entliziyweni yam uThixo, ukuba ndiyenze eYerusalem” (Neh. 2:12).
Akafihleli nje kuphela utshaba, koko uyayigusha nakwiinkokheli zamaYuda ngokunjalo.
Ukwiphulo lokuhlola ukubona ukuba yintoni edinga ukwenziwa. Isifundo 2: Phambi
kokuba azise nantoni, uNehemiya wenza umsebenzi ongowakhe aze acwangcise wonke
umsebenzi ozakudingeka. Isifundo 3: Xa ethetha ngomsebenzi, uNehemiya udandalazisa
kuqala oko uThixo akwenzileyo ukuzakuthi xhaxhe apha ukukhokhela oluhambo, aze emva
koko ongeze amazwi kakumkani. Uyakhuthaza ngaphambi kokuba acele ukuzibophelela.
Ayingaphantsi koommangaliso eyokuba amaYuda asebele kakuhle ngeyona ndlela aze
agqibe ukuba mawakhe, nokuba kukho inkcaso ezakuvela. UThixo walungisa hayi nje
kuphela ukumkani ngemithandazo nokuzila kukaNehemiya, kodwa ngokunjalo nabantu
bamaYuda, ukuze basebele ngokuzithemba nangokukhalipha.
Funda uNehemiya 2:19, 20. Ezi vesi zisixelela ntoni ngokholo lukaNehemiya? Ingaba
zamnceda njani uNehemiya iindima ezifana noDuteronomi 7:9, Ndumiso 23:1–6,
Iincoko zethu zibonisa ukuba singoobani nento esikholelwa kuyo ngokwenene.
UNehemiya ukhangeleka ethetha amazwi akhuthazayo. Akoyiki ukumbandakanya uThixo
kuko konke akuthethayo nokumzukisa kananjalo, nkqu naxa abantu bemgculela bemhleke.
Noxa uNehemiya eyazi indelelo ezinayo iintshaba ngakubo, akankwalambisi ukuthetha
okanye amshiye uThixo kwincoko. NjengoYosefu eYiputa kwiintlaninge yeminyaka
ngaphambi koku, uNehemiya akoyiki ukuphakamisa uThixo wakhe phakathi kwabantu
Lwesihlanu Okthobha 11
Contemplate “A Man of Opportunity,” pp. 628–634, in Prophets and Kings. UNehemiya
wayeyindoda yomthandazo: “UNehemiya wayesoloko ephalaza umphefumlo wakhe ngenxa
yabantu bakhe. Kodwa ngoku logama ethandaza kwakheka injongo engcwele engqondweni
yakhe. Ugqiba ekubeni ukuba angafumana imvumela kakumkani, noncedo oludingekayo
ukuzuza izixhobo nempahla yokusebenza, uzakuwuthatha ngokwakhe buqu umsebenzi
wokwakha iindonga zaseYerusalem nokubuyiswa kwamandla elizwe lakwaSirayeli. Waza
wacela iNkosi ukuba imphumelelise emehlweni kakumkani, ukuze likwazi ukuqhubekeka
eli cebo. ‘Khawumphumelelise umkhonzi wakho namhla, wabongoza, ‘umfumanise
imfesane phambi kwale ndoda. Iinyanga ezine uNehemiya walindela ithuba elilungileyo
lokuzisa isicelo sakhe kukumkani.”—Ellen G. White, Prophets and Kings, pp. 629, 630.
1. Kwimpendulo yombuzo wangoLwesithathu, kuthetha ukuthini ukuthi bonke
kuyo yonke iBhayibhile-iTestamente eNdala, iTestamente eNtsha-abo babebizwe
nguThixo bajamelana nenkcaso emandla? Eneneni, kuthetha ukuthini ukuthi
phantse kuyo yonke imeko kwenzeka oko? Mhlawumbi umbuzo ongcono
ingakukuba: Mizekelo mini onokuyifumana womntu obizwe nguThixo ukwenza
intando yaKhe ongazange ajamelane nenkcaso? Oku makusixelele ntoni
ngendlela ekufuneka singatyhafi ngayo, nokuba senza intando kaThixo, xa
sijamelana nemiqobo enzima ekuphumezeni oko sikholelwa ukuba iNkosi isibizele
2. Funda uNehemiya 2:18. Oku kusixelela ntoni ngamandla obunokuba nawo
ubungqina bomntu buqu, nendlela ekwakubaluleke ngayo ukufumana impendulo
entle awayifumanayo uNehemiya kumaYuda?
3. Akukho wayenokuphumeza nto ngaphandle koncedo lukakumkani nokuba nguEzra okanye uNehemiya. Ngamanye amazwi, la madoda akwaThixo asebenzisana
namagunya ezopolitiko, ayekwa ngabahedeni kanjalo. Sifundo sini esinokutsala
koku ngexesha nendlela esinokusebenzisa namagunya ezopolitiko akhoyo, nokuba
ngawaphi? Kwangaxesha nye, kutheni ibandla kufuneka lilumke kakhulu xa
4. Jongani umthandazo kaNehemiya (Neh. 1:1–11) eklasini. Yintoni
eninokuyithabatha kuwo enokunceda ukwendelisela ubudlelane bakho noThixo.
Ufundisa ntoni ngokuzinikela, imvumo-sono, nokubanga amadinga?
Taggedhosa ssllesson 2 4q19
Previous Article Nehemia